Fivavahana darmika - Wikipedia
Ny fianakaviam-pivavahana darmika, izay atao hoe fivavahana indiana koa, dia ahitana ireo fivavahana teraka tao amin' ny zana-kôntinenta indiana, dia ny hindoisma, ny bodisma, ny jainisma ary ny sikisma mbamin' ireo firehana ara-pivavahana nipoitra avy amin' izy ireo. Ny fivavahana darmika dia iray amin' ireo fianakaviam-pivavahana telo lehibe eto amin' izao tontolo izao, ka ny roa hafa dia ny fivavahana abrahamika sy ny fivavahana taôika. Ny teôlojia sy filôzôfian' ny fivavahana darmika dia mifototra amin' ny atao hoe darma (dharma), teny sanskrita mahafaoka ny hevitry ny hoe "lalàna", "toromarika", "adidy", ary indrindra amin' ny heviny ara-panahy momba ny lalànan' ny voajanahary sy ny zavamisy. Ny fivavaana darmika dia misy vokany ao amin' ny fiainan' ny vahoaka ao amin' ny zana-kôntinenta indiana, ao Azia Atsinanana ary ao Azia Atsimo-Atsinanana. Tsy dia hita ireo fivavahana ireo any ivelan' ireo faritra ireo. Ireo fivavahana ireo koa dia mifandray amin' izy samy izy.
Eva famantarana ireo fivavahana darmika, avy ankavia miankavanana ary avy ambony mianambany: hindoisma, sikisma, jainisma ary bodisma.
1 Ny dharma
2.1 Ny bokin' ny hindoisma: ny Veda
2.2 Faritra eto an-tany misy Hindoa
2.3 Hindoisma: fivavahana sy filôzôfia
4.1 Bodisma: fivavahana sy filôzôfia
4.2 Faritra misy azy eto an-tany
4.3 Tsy misy andriamanitra mpamorona
6 Fivavahana indiana hafa
6.3 Fivavahana nepaley
Ny hoe dharma dia zava-dehibe ao amin' ny fivavahana sy filôzôfia indiana. Arakaraka ny zavatra resahina sy ny manodidia izany dia miovany hevitr' io teny io izay avy amin' ny hevitra fototra ao amin' ny fototeny sanskrita hoe dhṛ, izay midika hoe "mitondra" na "manohana":
lalàna voajanahary, lalàna ara-pitsarana, fenitra, fomba amam-panao na adidy;
fiziana, toetra mampiavaka, fahamarinan' ny zavatra lazaina, zava-misy;
tsara, fahitsiana, fahamarinan' ny fitsarana, valy sahaza;
fampianarana, foto-pampianarana, fivavahana;
zavatra tsapa, zavatra, zavatra tsapan' ny saina.
Amin' ny ankapobeny dia manondro ny fitambaran' ny fenitra sy ny lalàna ny teny hoe dharma, ka mihatra izany na amin' ny lafiny ara-piarahamonina na ara-pôlitika na amin' ny fianakaviana na amin' ny isam-batan' olona, na manerana izao rehetra izao izany.
Ny hindoisma dia fivavahana sy filôzôfia ary fomba fiainana nipoitra ao amin'ny zana-kôntinenta indiana, isan' ireo fivavahana tranainy indrindra eran' izao tontolo mbola misy manaraka, mino ny fahefan' ireo boky atao hoe Veda izay nambara tamin' ny olombelona tamin' ny alalan' ilay andriamanitra mpamorona atao hoe Brahmâ. Mampiavaka ny hindoisma ny fanambarany karazana finoana sy fanao avy amin' ny fivavahana samihafa (sinkretisma). Ny hindoisma dia manakaiky ny animisma. Tsy manana mpanorina sy tsy misy andrim-pitantanana voalamina amin' ny fomba ranoray ny hindoisma satria ireo mpampianatra ny finoana, atao hoe Brahmana, dia samy manana ny fikambanam-pampianaram-pinoana misy azy .
Ny bokin' ny hindoisma: ny VedaHanova
Ny ankamaroan'ny Hindoa dia mino ny fahefan'ireo boky atao hoe Veda izay ekeny fa nambara tamin' ny olombelona "tsy araka ny fomban' olombelona" (apauruṣeya) tamin' ny alalan' ilay andriamanitra mpamorona atao hoe Brahmā (na Brahmâ) araka ny fandrenesan' ireo Rishi (izany hoe "mpahita"). Tsy fantatra ny nanoratra ireo Veda ireo ary ny sasany dia anganongano no ahafantarana azy tahaka an' i Vyāsa.
Faritra eto an-tany misy HindoaHanova
Ao amin' ny zana-kôntinenta indiana no tena betsaka mpanaraka ny hindoisma nefa ahitana azy koa ireo toerana ivelan' i India izay misy Indiana mpifindra monina toa an' i Afrika Atsinanana sy Atsimo, i Azia Atsimo-Atsinanana, ireo Antilia ary i Angletera. Ny hindoisma no laharana fahatelo amin'ny fivavahana be mpanaraka indrindra aorian'ny kristianisma sy ny silamo. Tamin'ny taona 2015 dia niisa teo amin'ny 1.100.000.000 ny mpivavaka manaraka ny hindoisma ao amin'ny firenena 85. Izy no laharana fahatelo amin'ny fivavahana be mpanaraka indrindra aorian'ny kristianisma sy ny silamo.
Hindoisma: fivavahana sy filôzôfiaHanova
Raha hatao hoe "fivavahana" fotsiny ny hindoisma dia tsy tokony hampitovina amin'ny andraisan'ny kristianisma na ny jodaisma ny hoe "fivavahana" izy satria hafa ny fandaminana hita ao na hatramin'ny ivon'ny fampianaram-pinoany aza. Ny hindoisma dia fitambaran-kevitra filôzôfika nolovana hatrany alohan' ny nahafantarana ny tantara indiana. Ny fampiaharana ny hindoisma amin' ny fiainana dia avy tamina lovantsofina tranainy dia tranainy, manakaiky ny atao hoe animisma. Mampiavaka ny hindoisma ny toetrany izay ahitana fanambarana karazana finoana sy fanao avy amin'ny fivavahana samihafa (sinkretisma).
Ny jainisma na darma jaina dia fivavahana izay mampianatra fa ny tanjon'ny fiainana dia mitovy ho an'ny hindoisma sy ny bodisma ary ny sikisma. Ny mpanaraka io fivavahana io dia tokony hanao tanjona ny fahatratrarana ny fihazavana izay mitarika amin'ny fitsaharan'ny fifindran'ny fanahin'ny zavamananaina iray amin'ny zavamananaina iray hafa (samsara), atao hoe môska na nirvana. Mandala ny fisainanana tsy misy herisetra (ahimsa) ny jainisma. Amin'ny jainisma dia mifampiankina ny fiainana rehetra ka tokony hifanampy. Ny fandinihan-tena sy ny fifadian-kanina dia fanao ao amin'ny jainisma.
Ny bodisma dia fivavahana sady filôzôfia izay nipoitra avy tao India tamin' ny taonjato faha-5 tal. J.K. noho ny fifohazana ara-panahin' i Sidarta Gaotama (Siddhartha Gautama) sy ny fielezan' ny fampianarany.
Bodisma: fivavahana sy filôzôfiaHanova
Ny bodisma dia sady fivavahana no filôzôfia ka mampianatra ny olona hamarana ny fijaliany amin' ny alalan' ny fanesorana ny fankahalana, ny tsi-fahalalana ary ny fitiavam-bola tafahoatra. Rehefa manao zava-dratsy ny olona dia hitarika voka-dratsy ho azy izany. Rehefa manao zavatra tsara ny olona dia hitarika voka-tsoa ho azy izany.
Fitambarana fanao misandrahaka ny bodisma ka hita ao ny fandinihan-tena, ny vavaka, ny fanatitra, ny fitandramana ara-pitondrantena, ny hevitra ara-psikôlôjia sy ara-pilôzôfia; ny fampianarana momba ny fahaterahan' izao rehetra izao sy ny fiheverana momba izany, ka ny fomba fijerin' ny "voafoha" (bodhi) no entina manakatra izany rehetra izany.
Faritra misy azy eto an-tanyHanova
Tamin'ny taona 2018 dia niisa 623 tapitrisa ny Bodista maneran-tany, izay mametraka io fivavahana io ho laharana fahefatra aorian' ny kristianisma sy ny finoana silamo ary ny hindoisma. Nisy fihemorana ny isan' ny mpanaraka azy tamin' ny taonjato faha-20 noho ny fanenjehan' ny fitondram-panjakana kômonista azy tao Sina sy tao Indôsina.
Tsy misy andriamanitra mpamoronaHanova
Ny fampianaran' ny bodisma mikasika ny andriamanitra sy ny fomban' andriamanitra dia tsy itoviany amin' ny an' ny fivavahana hafa: azo heverina ho fivavahana tsy manana andriamanitra mpamorona ny bodisma; satria tsy misy firesahana momba izany ao amin' ny ankamaroan' ny sampan' ny bodisma, ny fitsaohana sy ny fanompoam-pivavahana amin' ny Bodà amin' ny maha bhagavat azy dia mandray anjara lehibe ao amin' ny teravada sy ao amin' ny mahaiana, izay manao an' i Bodà ho Bodhi ("voafoha") manana ny vatam-pisehoana telo sosona atao hoe trikāya.
Ny sikisma dia fivavahana mônôteista naorin' i Gurû Nanak tao amin' ny tapany avaratr' i India tamin' ny taonjato faha-15. Ny mpino sika dia mino mino ny fisian' ny Andriamanitra tokana Faratampony tsy manam-petra, mandrakizay, mpamorona, anton' ny anton-javatra rehetra, tsy manam-pahavalo, tsy misy fankahalana, izay sady ato amin' izao tontolo izao no ao ivelany sy mihoatra azy (mihoa-draha). Atao hoe Goró Faratampony izany Andriamanitra izany. Tsy manohitra ny fivavahana kristiana na silamo na hindo ny sikisma fa mihevitra azy ireo ho fomba samy ahafahana mivavaka amin'Andriaanitra.
Fivavahana indiana hafaHanova
Ny meivazy fia fivavahana mônôteista mampifangaro singa maro avy amin' ny fivavahana samihafa izay manana ny fobeny ao Tamil Nadu any India. Mikatsaka ny hampiely ny tena tanjon' ny fivavahana isanisany nipoitra eto an-tany io fivavahana io, mitory ny maha iray ny fivavahana rehetra. I Meivazhi Salai Aandavargal, izay heverina ho fahatongavan' Andriamanitra ho nofo farany indrindra izay nandrasan' ny fivavahana rehetra, no mpanorina azy. Nanatanteraka ny fampikambanana sarangam-poko samihafa tsy anavahana finoana na volon-koditra na fivavahana izany fivavahana izany. Ny hany zavatra takiana mba ho mpanaraka ny fivavahana meivazy dia ny finoana an' Andriamanitra. Voarara ny fifohana paraky, ny fisotroana toaka, ny loka, ny halatra. Mihinana zavamaniry fa tsy hena ny mpino meivazy.
Ny sarnaisma dia fivavahana amin' ireo zohy masina (sarna) ao amin' ny fanao ifandovana ao amin' ny faritry ny Lembalemban' i Chota Nagpur ao amin' ny fanjakan' i Jharkhand sy ny an' i Bihar sy ny an' i Assam ary ny an' i Chhattisgarh. Ny mpanaraka izany fivavahana izany voalohany dia tao amin' ny fokon' ny Baiga, ny an' ny Ho, ny an' ny Kurukh, ny an' ny Munda ary ny an' ny Santal. Araka ny finoan' ny mpanaraka ity fivavahana ity dia misy Gram deoti na Grāmadevatā ("andriamanitry ny tanàna ambanivohitra") ao amin' ireo Sarna ("zohy"), ka ao ny mpino no manolotra sorona indroa isan-taona.
Taona vitsy lasa izay no nisy fikambanana ara-poko sy fikambanan' ny foko Kudumi Mahato nangataka fehezan-dalàna ho an' ny Sarna, izay azy manokana fa tsy itambarany amin' ny hindoisma, satria mino izy ireo fa mivavaka amin' ny zavaboary.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_darmika&oldid=1038073"
Dernière modification le 26 Septambra 2021, à 08:47
Voaova farany tamin'ny 26 Septambra 2021 amin'ny 08:47 ity pejy ity.